Global Voices teny Malagasy » Sakafo An-dalambe Avy Ao Panamà, Mandoo Avy Any Korea, Ary ny Lahatsary Hot Pot Avy Any Shanghai · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 20 Jolay 2017 6:07 GMT 1	 · Mpanoratra Melissa De León Nandika imanoela fifaliana
Sokajy: Amerika Latina, Korea Atsimo, Panamà, Shina, Fivavahana, Mediam-bahoaka, Sakafo
#1: Avy any Korea: Kimchi Mamas sy fomba fahandro iray hikarakaràna ny Mandoo , ny fomba tsotra hanomànana ireo bolabolan-tsakafo koreana!
Raha mbola tsy nanao mandoo mihitsy ianao tany aloha tany, tena tsy sarotra mihitsy io. Ny fikarakaràna ny bolabola no tena mandany fotoana aminy. Vita izay dia vita ny aminy,
Avelanao hiketrika miadana ao ny mandoo, ao anaty ron-kena kisoa-omby-akoho (eny, izy telo mitambatra) mandra-pitsingevan'izy rehetra, ary avy eo, ampiana angamba iray minitra eo ho eo. Manokàna hena akoho vitsivitsy avy amin'ilay ro teo mba hatao fangaron'ny lasopy atsy aoriana kely. Afaka mahandro ampolony eo ho eo indray miaraka ianao. Tohizo ato ny vakiteny (ang) .
#2: Avy any Panamà: ianaro miaraka amin'i Cooking Diva ny momba ireo sakafo an-dalambe ao Panamà :
Tsaroako ireo arabe efatra feno tranokely navadika ho fisakafoanana, na ‘fondas’ sy ireo olona maro mandehandeha mivarotra fahatsiarovana. Sakafon'ny faritra matetika no tena aroso, ilay karazana izay karakaraina any amin'ny faritra ambanivohitra miaraka amin'ireo zava-manitra fanampin-tsiro sy amin'ny fomba nentin-drazana efa nampiasain'izy ireo ampolo taona maro. Vakio ato ny lahatsoratra feno ary ankafizo ireo sary mampilendalenda …
#3: Avy any Orogoay: Amargo y Dulce mitsidika an'i La Perdiz , trano Basque iray fisakafoanana ao Montevideo.
Ny sakafo voalohany dia sakafo hita tsy tapaka ao anaty lisitra. Aroso anaty lovia bakoly, ny angisy izay nahandroina tanaty saosy matsiro arahana persily nomasahana tamin'ny entom-bary. Ny filazàna fohy avy amiko momba ny angisy dia ny ‘calamars’ voaendy, ary io dia tontolo iray hafa mihitsy. Malefaka, tsy mirirotra; matsiro, tsy matsaboka. Nahafaly anay ny maha-vokatra vaovao ireo haza an-dranomasina sy ny tsiro nomeny. Tsindrin-kanina tena tsara tokoa ireo “Croquets”, mbola sakafo iray hafa koa hita tsy tapaka anaty lisitra ary tena safidy iray tsy mandany vola. Ny fantina farany ho antsika dia ny salady mahafinaritra. Zavamaitso afangaro, baranjely sy holatra nasosa tanaty rano mafàna, dipoavatra mena, tabia, ary hatramin'ny sakay…jalapeño…Vako ato ny tatitra manontolo 
#4: Avy any Soeda: Ny “Ramble” avy amin'ny Sefo sy hainahandro iray nentindrazana hikarakaràna ny Semla, fihinana rehefa Talata MAtavy 
Ny Semla, tany ampiandohany, dia sakafo fihinana fotsiny rehefa Talata Matavy, ho toy ny fety fisakafoanana mialoha ny Karemy. Kanefa, niaraka tamin'ny Protestantisma, natsahatr'ireo Soedoà ny fanajàna ny Karemy, fa lasa tsindrin-tsakafo nentindrazana fihinana isaky ny Talata eo anelanelan'ny Talata Matavy sy ny Paska ny Semla ao anatin'ny kaopiny feno ronono mafàna.
Ankehitriny, hita eny amin'ny toeram-pivarotana sy mpanao mofo rehetra eny ireo semlas, isanandro, fotoana fohy manaraka ny Krismasy mandra-pahatongan'ny Paska. Isantaona ny Soedoà iray dia mihinana semla dimy novokarin'ireo mpanao mofo, ho fanampin'ireo rehetra natao tany an-tranon'ny tena. Ato ny tohiny …
#5: Avy any Japàna: Obachan, namorona hainahandro matsiro ho an'ny Fromazy Mozzarella Nalona Tanaty Miso .
Kisendrasendra no nahitako tranonkala Japoney miresaka momba ity hevitra mahaliana ity, ary toy ny mahazatra, tsy vitako ny niaritra tsy hanandrana azy. Tsy dia nahagaga loatra hoe toy ny fifangaroanà fetan-tsaramaso nomamiana sy paiso manta. Imbetsaka aho no efa namaky fa mazàna ny fifangaroanà sakafo naotrika dia manome taharo tsara tokoa. Alaivo ato haingana ny momba azy io …
#6: Avy Amin'ny Fikarakaràna Lalina: Mba hodinihanareo. “Eddie Lin sy ny Hot Pot -n'ny Lahatra.” 
Ho an'ireo zazavao amin'ity fanasambe nentindrazan'ny Shinoa sy ny Mongol ity, nikarakara ity lahatsary fampahafantarana ity i Eddie Lin. Nalaina fony izy sy ilay nàmany nitsidika ny trano fisakafoanana iray manandaza ao Shanghai izy io. Hita tao anaty lisitra ireo hena manta voasilantsilaka, nahandroina tanaty ron-kena eo an-databatra, ary avy eo hanina miaraka aminà saosy na atao toy ny lasopy. Amin'ity indray mitoraka ity ny fifantenana ireo hena manta dia ahitàna ny : atidohan-kisoa, atody akoho, ondry, amalona mavo, bibitin'omby, tendan-kisoa, “racoon”, voay ary ny maro hafa.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2017/07/20/103971/
 Vakio ato ny lahatsoratra feno ary ankafizo ireo sary mampilendalenda: http://panamagourmet.blogs.com/cookingdiva/2007/02/unsatisfactory_.html
 La Perdiz: http://bittersweetinuruguay.blogspot.com/2007/02/la-perdiz.html
 Talata MAtavy: http://log.pelleplutt.eu/2007/02/20/shrove-tuesday-or-fat-tuesday/
 Fromazy Mozzarella Nalona Tanaty Miso: http://kokonuggetyumyum.blogspot.com/2007/01/guess-what-this-is.html
 Mba hodinihanareo. “Eddie Lin sy ny Hot Pot -n'ny Lahatra.”: http://www.deependdining.com/2007/02/for-your-consideration-eddie-lin-and.html